बोल्न नसक्नेको अकल्पनीय अन्त्य
काेराेना कहर : रातारात उपत्यका छोड्नेकाे घुइँचाे (तस्बिरहरू)
एलिना र यात्रीको आवाजमा ‘अंग्रेजीमा बनाना’ सार्वजनिक
वर्ल्डलिंकका निर्देशक विजयकुमार जालानको निधन
डिजिटल माध्यमबाट पनि रंगमञ्चलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ : दयाहाङ राई
यशराज फिल्मको ५०औँ वार्षिक उत्सवको सम्पूर्ण बजेट भारतको कोभिड राहत कोषलाई
यसरी मनाइयो ईद–उल–फित्र (तस्बिरहरू)
यसरी चल्दैछ राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण
रथयात्राका लागि ललितपुर प्रशासनले तोक्यो निषेधित क्षेत्र : पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने
तीन अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइप लाइनलाई बजेट स्वीकृत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा पदभार ग्रहण
कर्णालीका तीन मन्त्रीकाे शपथ नै नलिई जिम्मेवारी खोसियो
विचार बोल्न नसक्नेको अकल्पनीय अन्त्य
बाह्रखरी - सोमबार, साउन ३, २०७३
राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यालयमा एकजना हाकिम दुवै खुट्टा टेबलमाथि पसारेर बसेका छन् । मानौं त्यो कुनै सरकारी कार्यालय होइन सिनेमामा देखाइने गुन्डाको अखाडा हो । त्यहाँ उभिएका छन् ओठ सुकेका, त्रासले अनुहार निलो बनाएका व्यक्ति । उनको दुई हात जोडिएको जोडियै छ, चिप्लेर हात खुस्क्यो भने अहिल्यै मृत्युदण्डको भागिदार होइन्छ कि भन्ने डर भएझैँं । टेबलमा बसेका व्यक्ति बडो रोबदार ढंगमा बसेका छन् । उनको अनुहारको भाव हेर्दा लाग्छ अगाडि बस्ने व्यक्तिको मृत्यु र जीवनको डोरी उनैको हातमा छ ।
“तँ मु.... ले के खोजेको ? सारा देश बिगार्ने, देश सिंगै तिमीहरू खाने । अब हेर म देखाउँछु तिमीहरूको नानीको ताईं,” हाकिम सा’ब बोेले ।
“हैन हजुर यसो मिलाइदिनुप¥यो । कर त सबै तिरेकै हो, अलिअलि हिसाब राख्न नजानेको मात्र हो, यसो हेरेर मिलाइदिनुप¥यो,” व्यापारीजस्ता देखिने व्यक्तिले सुकेको मुखमा मुस्किलले अलिकति थुक ल्याएर बोले ।
“अँ, मिलाउने ? के के मिलाउने ? कति कति मिलाउने ? हामीलाई जागिर खानु छैन । अब तँजस्तालाई नांगेझार बनाउने हो । अरू केही मिल्दैन,” ती हाकिम अझ कडा ढंगले बोले ।
“तर हजुर, केही अपराध नगरीकन त्यसै हामीलाई दुःख दिनु त अख्तिायर दुरुपयोग भएन र?” मर्नुभन्दा अघि बेस्सरी चिच्याएको बोकाको जस्तै आवाज व्यापारीको मुखबाट निस्क्यो ।
“हा हा... अख्तियार । अख्तियारको भाग नलागी अहिले कतै काम हुन्छ ? छोडिदे अख्तियारको धम्की । थुनीदिन्छु दस दिन अनि थाहा पाउँछस्,” हाकिम कूटिल हाँसो हाँसे ।
यो काल्पनिक घटना होइन । एक जना व्यापारीले भोगेको घटना हो । उनले न त आफ्नो नाम बताउन सके न ती कर्मचारीको । नाम नलेख्ने सर्तमा पत्रकारसँग दुःख पोख्ने आँट मात्र गरे । सत्य घटनालाई कतैबाट प्रमाणित गरेर समाचार बनाउन नसकेपछि त्यसलाई व्यक्त गर्न लेखको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता घटना अनेकौं छन् । अहिले देशमा सरकारको होइन अख्तियारको शासन चलेको छ । कुनै पनि ठेक्का, टेन्डर, निर्माण, खरिद केही पनि अख्तियारको इसारा नपाईकन हुँदैन । “कर्मचारीले कुनै पनि विकास निर्माणको काममा जिम्मेवारी लिएर सही गर्दैन । अख्तियारको लाइन नआएसम्म कर्मचारीको कलम डेग चल्दैन । जुन कर्मचारीमाथि अख्तियारको आशीर्वाद हुन्छ वा लाइन आउँछ उ भटाभट सही गर्छ, भटाभट रकम उठाउँछ । कता कता दिन्छ, कसरी मिलाउँछ ऊ नै जानोस्,” एक जना वरिष्ठ भन्सार अधिकृतले बताए ।
कुनै पनि शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग ग¥या ेभने केसम्म गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ अहिलेको नेपाल । जहाँसुकै गए पनि, जे सुकै गरे पनि अख्तियारको डर र त्रास छ । जुन जुन व्यक्तिले अख्तियारको त्रासका कारण कुनै समस्या भोग्नुपरेको छैन तिनलाई लाग्दो हो, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही भएको छ, ठिकै त छ । तर अवस्था तिनले सोचेजस्तो छैन । भ्रष्टाचारीलाई होइन अख्तियारले फैलाएको सन्त्रासबाट अप्रभावित व्यक्तिलाई त्रसित पार्ने कार्य हुँदैछ । भ्रष्टाचारी त अख्तियारको आर्शीवाद लिएर मस्त भ्रष्टाचार गर्दैछ । तर, कोही पनि विरोधमा बोल्यो भने त्यसविरुद्ध कुन सरकारी निकाय प्रयोग गर्ने त्यो काम अख्तियारलाई राम्ररी थाहा छ । व्यापारी बोल्यो भने राजस्व अनुसन्धान विभाग, अरु बोले प्रहरी । अख्तियारले कुैनपनि सरकारी संस्थालाई निर्देशन पठाउने चलन बनाएको छ । कर्मचारी पनि सरकारको आदेशभन्दा अख्तियारको निर्देशनमा बढी आत्तिन्छन् । सरकारले हदै गरे दुर्गममा सरुवा गर्छ तर अख्तियारले तुरुन्त बयान दिन बोलाएर हिरासतमा राख्न सक्छ । अब यस्तो अत्यन्त बलियो बनाइएको अख्तियारले रावणमनमा काम गरेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सर्वत्र व्याप्त भएको छ । तर बोल्न कोही सत्तैmन ।
यो समाजलाई अख्तियारको त्रासद शासनबाट बाहिर निकाल्न एक जना निडर र हक्की व्यक्तित्व, इस्पातको छाती र फूलको मन भएको दृढ देश प्रेमी चाहिएको थियो । धेरै अख्तियार पीडितले डा. गोविन्द केसीमा त्यो अदम्य साहस र जनताका लागि मरिमेट्नसक्ने इच्छाशक्ति देखेको कारण नै अहिले नेपाली समाज स्वदेशमा र विदेशमा सबैतिर उद्वेलित भएको छ ।
कतिपयलाई लागेको छ, डा. गोविन्द केसीलाई किन अख्तियारको विरोध गर्नुप¥यो ? अख्तियारले एउटा गल्ती नै गरेको भए पनि महाभियोग किन लगाउनु प¥यो ? यस्तो कुरा दुईथरीका मान्छेको मनमा बसेको छ । एउटा साँच्चिकै मनमा कुनै स्वार्थ नभएका तर अख्तियारको सन्त्रासमा परेर दुःख नपाएका मान्छे । अर्कोथरी भने अख्तियारको प्रभाव क्षेत्रमा समाहित भएर देश र गरिब जनता चुस्ने कार्यमा संलग्न हुन कत्ति नहिच्किचाउनेहरू । डा. गोविन्द केसीको मागको मर्म बुझ्नेले पहिलो थरीलाई विस्तारै सम्झाउन सक्लान् तर कुनै पनि तवरले पैसा र शक्तिको नजिक हुन चाहने व्यक्तिलाई कसैले सम्झाउन सत्तैmन । पञ्चायत सँगै जसरी धेरैको रवाफ गयो यिनको पनि त्यही हविगत हुन्छ । तर शक्तिमा भएको बेला कसैलाई पनि मेरा पनि दूर्दिन आउँछन् भन्ने लाग्दैन । यिनका लागि राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न ।
व्यक्तिगत स्वार्थ नभएकालाई यो कुरा बुझाउन गाह्रो छैन । कुनैबेला देशमा भएका भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्ध आँैला उठाउन किन मदन कृष्ण र हरिवंशले जोखमिपूर्ण कोसिस गर्नुपरेको थियो ? सन्तोष पन्तजस्तै बीचको बाटो रोजेको भए भइहाल्थ्यो नि ! काजीका सन्तान, ठमेलमा त्यत्रो सम्पत्ति भएका गणेशमानले राजाको विरुद्धमा दुम्जाली कोइराला बाहुनको समर्थन किन गर्नुपथ्र्यो ? केशरजंग रायमाझीको वा तुलसी गिरीको बाटो समातेकाा भए रजाइँ गर्थेे । तिनलाई नपुगेको के थियो र ? लमजुङका ती निरपराध शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई किन माओवादीको विरोध गर्नुपथ्र्यो ? अन्य शिक्षकझैं माओवादीलाई लेभी बुझाएको भए भैहाल्थ्यो नि । तर एउटा सार्वभौम इज्जत, देशको माया र त्यागको भावना भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि लोभ, लालच र माया मोहले देश र जनताको हितमा बोल्न रोक्न सक्दैन । डा. गोविन्द केसी त्यही अदम्य साहस र जनहितका लागि प्राण उत्सर्ग गर्नसक्ने दृढता बोकेका व्यक्ति हुन । उनलाई कुनै नरभक्षी बाघले घोक्य्राएर पठाएको ब्वाँसाहरूले गलाउन सत्तैmनन् ।
दुःख त केमा लागेको छ भने अहिले पदमा भएका धेरैलाई आफू कहिल्यैे मर्दिन र आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि जे पनि गर्छु भन्ने सोच जागेको छ । आफ्नो पद केही महिना जोगाउन जति पनि सुरक्षाकर्मी जुनसुकै कामका लागि दिने सुरक्षा निकाय, कसैको विरुद्ध नक्कली फाइल बनाउने कर्मचारीतन्त्र र सधैँ कुनै सुरक्षाको आवरणमा बस्न चाहने विकृत सोचका राजनीतिक नेतालाई नेपाली जनताले कति सराप्लान् भन्ने अलिकति पनि हेक्का नभएको देख्दा कविशिरोमणी लेखनाथ पौड्रयालको यो कविता सुनाउनबाहेक के नै गर्न सकिन्छ र ?
मै खाउँ, मै लाउँ
सुख सयल वा मोज मै गरुँ
म हाँसु, मै नाँचु
अरु सब मरुन् दुर्बलहरू
भनि दाह्रा धस्ने अबुझ शठदेखि वरिपरि
चिता खित्का छाडी अभयसँग हास्यो मरीमरी ...
सोमबार, साउन ३, २०७३ मा प्रकाशित
बालबालिका कति जोखिममा ?
खोप पूर्णरूपमा तयार हुन अझै एक वर्ष लाग्नसक्छ । त्यस्तै केही दिनअघि मात्र भारतमा २ वर्षमाथिका बच्चामा खोपको प्रभावकारिता बारे... १४ घण्टा पहिले
कोभिड–१९ को विश्व महामारीबाट नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित बन्न पुग्यो । शैिक्षक सत्र २०७७ को अधिकांश सिकाइ प्रक्रिया ‘अनलाइन‘... बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८
ऐनको फितलो कार्यान्वयन र युवावर्गमा जथाभावी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन अझै पनि नेपालको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा मुख्य स्वास्थ्य समस्याका... बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८
अभिशप्त नियति कि नेताकाे दुर्नियत ?
महामारी त बेथितिकाे नाम सुन्न पनि मन नलाग्ने भइसक्याे । नेपाली जनता यति निरीह सायद पहिले कहिल्यै भएका थिएनन् ।... बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८
नेपाली राजनीतिको गिनिज बुके छलाङ्
हेर्दै जाऊँ, धेरै दिन छैन यी सबै परिणाम पर्खन । महामारी थामिन र जनताको दर्द कम हुन भने अलि दिनको... बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८
आमा : जीवित देवी
आमा, संसारको सबैभन्दा गहन शब्द । यस शब्दको अर्थ पर्गेल्न खोज्नु मूर्खता हुनेछ । कुनै परिभाषाले पनि यसको अर्थ पूर्ण हुँदैन... बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८
नेपालमा कोरोनासँग जुध्न बेलायतमा रहेका नेपाली एकजुट
अमेरिकामा गोली प्रहारबाट एक नेपालीको मृत्यु, एकजना घाइते आइतबार, वैशाख २६, २०७८